Daawo:- Kooxda Al-shabaab Oo Dab Qabadsiiyay Istashin Booliis Oo Ay Leedahay Dalkaas Kenya (Daawo Maqal Muqal)
Fikradaha ISLAM Muqaalo taariikh Wararka Waraysi Youtube December 31, 2017
Nairobi(Allssc): Xubno la tuhunsanyahay in ay ka tirsanyihiin Al-Shabaab ayaa weeraray oo Dab Qabadsiiyay Saldhigga Booliska ee Ijara oo ku yaalla Garissa.
Kooxda weerarka qaadday ayaa ka koobnaa 50 waxay sidoo kale kaxeysteen Gaari Land Cruiser ah oo ay Boolisku lahaayeen iyagoo sidoo kale Burburiyay Safaricom Laan dhanka Xiriirka ah oo goobta ugu taallay, keddib markii ay Bambaano ku dhufteen.
Waxay bililiqeysteen Dukaan ganacsi oo Saldhigga u dhowaa.
Wuxuuna weerarku dhacay Abbaare 2.15am habeennimadii Xalay oo Sabti aheyd, iyadoo ay Boolisku ku guuldarreysteen in ay kooxda weerarka qaadday iska caabiyaan, sida dadka deegaanku ay sheegeen.
“Waxaa jira dad dhaawacmay. Weli waxaan ku howlannahay in aan ogaanno sida ay xalay Saqdii dhexe wax u dhaceen,” waxaa yiri Sarkaal Booliska u hadlay.
Inta weerarku socday, waxaa la maqlay Rasaas la is dhaafsaday oo socotay 20 daqiiqo Ugu yaraan.
Waxaa Saldhigga la weeraray xilligaas ku sugnaa 40 Saraakiisha Booliska ah waxaana dhammaantood lagula xisaabtami doonaa sida ay wax u dhaceen.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in aysan kooxda weerarka qaadday Saldhiggaas ka qaadan wax Hubkii Booliska ka mid ah.